1. Ireny kesika fitondrana voankazo ireny no atambatra ka omena endrika toy ity amin’ny sary voalohany ity. Ireo voninkazo efa voasafidy kosa no apetraka aminy, ary arakaraky ny haben’ny trano no hampiasaina ny kesika. Na kesika efatra monja aza fa atao mitsivalana ny roa ary mitsangana kosa ny roa dia mety.
2. Raha manana latabatra malalaka ianao ao an-dakozia dia tena mety ireto boatin-dronono ireto. Hambolena persily, kotomila sy solila kely na hanitra samihafa ohatra. Fatorana tady kely na lamba miloko marevaka dia efa hamoaka ny endriny. Atao manakaiky hazavana kosa izy ireo, raha azo atao
3. Efa betsaka ny manamboatra azy ireto, eto amintsika. Ilay tavoahangy notapahina ka lokoina sy asiana sarisary eo aminy. Ireo voninkazo tsy dia mila rano loatra no tsara volena aminy. Apetraka ao an-dakozia na ao amin’ny efitra fandraisam-bahiny izany